Coronavirus Oo Cabsi Iyo Argagax Ku Riday Maraykanka, Qiimaha Qalabka Laga Xidhto Oo Si Aan Caadi Ahayn U Kordhay | #1Araweelo News Network
Coronavirus Oo Cabsi Iyo Argagax Ku Riday Maraykanka, Qiimaha Qalabka Laga Xidhto Oo Si Aan Caadi Ahayn U Kordhay
“Cabsida Coronavirus ayaa Faaruqisay Dukuumada Dadkana Ka Dhigtay Sidii Wax Waalan, Dadku waxay U ordayaan inay badbaada naftooda iyo qoysaskooda” Jack Arnest.
Warbixin: By Carraale M. Jama Journalist and human rights activist
Washington(ANN)-Xaalad wer-wer iyo argagax ku abuurtay shacbiga Maraykanka, ayaa ka dhalatay markii lagu arkay ku dhowaad 20 gobol inuu ku faafay cudurka sida weyn u saamayeeyay dunida ee Coronavirus.
Dadka oo ka wer-wersan xaalada, ayaa ku dareeray goobaha dukuumadda, iyagoo raadinaya waxyaabaha gancaha iyo wejiga lagu xidhto iyo waxyaabaha nadaafada loo adeegsado, sido kale, waxay doonayaan inay cuntooyin ku kaydsadaan guryahooda, waxayna arrimahaasi sababeen in qiimaha waxyaabaha ugu baahida badan xilligan ee Gamcaha iyo wejiga lagu xidho iyo agabka kale ee loo adeegsado nadaafada si laysaga ilaaliyo Coronavirus ay si weyn gabbaabsi u noqdaan, isla markaana uu qiimihu gaadho halkii ugu saraysay.
Xaaladan waxa jira dad ganacsi ka dhex bilaabay si ay uga faa’idaystaan Coronavirus, mana jiro sharci xakamaynaya, dadku waxay ka ordayaan Coronavirus oo faafaya, waxay u ordayaan si ay naftooda iyo qoysaskooda uga badbaadiyaan dhibaatada kusoo fool-leh ee Caafimaad,
Mareykanka wuxuu arkayaa baahi weyn oo ah inay wax kasta oo ku yimaada xidhtaan maaskarada wejiga ee Afka waxyabaha gacmaha la gashado iyo kuwa nadiifiyayaasha ah. sidaa waxa yidhi, Jack Arnest, oo 67 jir ah, isla markaana sheegay inuu dhammaadka todobbaadka oo dhan xaawilyay sidii uu waxyaabaha Maaskarada Afka N5 u heli lahaa, kadib markii uu ka shaacay qiimaha uu la arkay liiska eBay oo ku qoran sedex sanduuq $ 62. balse ugu danbayntii wuxuu sheegay inuu xaqiiqsaday inuu helayo seddex waji oo keliya, wuxuuna deg-deg ula hadlay eBay isagoo ka codsaday inay ka saaraan liiska qiimaha aan macquulka ahayn.
“Ma jiro hab sanduuq 20 maaskaro ah uu ku kici karo $ 400. Taasi waxay ahayd tusaale cad oo goyn kara. Qof ayaa runtii halkaas ka faa’iideysanaya. ”ayuu yidhi Arnest, oo ah maamulaha mashruuca howl-gabka ah iyo injineer ka ah shirkadda dhismaha ee Honolulu.
“Ma jiro siyaasad soo laabasho sidaa darteed haddii aanan isla markiiba la kansali lahayn, waan ku dhegi lahaa waana iga xumaatay. Taasi waa nin ka faa’ideysanaya xaqiiqada ah in qof walba uu ka baqayo halkaas oo dadku degdegayaan, iyagoo ku deg-degaya sidii ay u heli lahaayeen si dhakhso leh waxa ay doonayaan, iyagoo aan sugayn ama aan doonayn inay akhriyin daabacaadda wanaagsan, ayuu yidhi Arnest, oo ah maamulaha mashruuca howl-gabka ah iyo injineer ka ah shirkadda dhismaha ee Honolulu.
EBay, ayaa dhankiisa xusuusiyay dadka wax iibinaya in aannay ku darin liiska waxyaabo sheegaya qalbaka caafimaadka iyo sidoo kale Erayada ay ka mid yihiin “Coronavirus,” “Covid-19,” “Fayras,” iyo “faafa”) kuwaas oo dhammaantood ah ereyo la mamnuucay.
Sidoo kale, liisaska dadka doonaya inay ka faa’iideystaan musiibooyinka ee samaynaya sicir bararka qiimaha suuqa. waxa u digay eBay iyo Walmart oo ah Labada Conpeny ee waaweyn ee dhanka Internetka ku iibiya, isla markaana ay dadka Maraykanku aad ugu xidhan yihiin, waxayna u sheegeen USA TODAY inay si dhow isha ugu hayaan xaalada, isla markaana ay ka saarayaan liisaska ka soo horjeedda siyaasadaha ganacsiga.
Qaar kale oo daawanayay dad internetka iyo suuqyo yar yar ku iibiya agabkan xasaasiga ah ayaa sheegaya in lagu garaacayo qiimaynta indhaha. Qiimaha dhoofinta ayaa sidoo kale cirka isku shareeray, iyada oo hal dukaan laga soo xigtay $ 500 oo dhulka ah iyo $ 5,000 dayuuradda maalinta ku xigtay.
Iibiyayaasha qaybaha saddexaad ee keydka guryaha waaweyn ee Amazon.com, Walmart iyo eBay waxay u muuqdaan inay tijaabinayaan waxa suuqa uu qaadi doono. warbaahinta bulshada ayay si weyn u buux dhaafiyeen cabashooyin. Gavin Newsom guddoomiyaha California, ayaa ka mid noqday dadka sida weyn arrimahan uga cawday, wuxuuna yidhi, “Si daran, @amazon? Qiimayaashani waa wax aan macquul ahayn.
Maraykanka, wuxuu Coronavirus ku faafay gobolada, Washington 44, Oregon 2, California 51, Arizona 2, Utah 1, Nebraska 13, Texas: 11, Wisconsin 1, Illinois 4, Florida 3, Georgia 2, North Carolina 1, New York 11, New Hampshire 2, Rhode Island 2, Massachusetts 2.
Aqalka Wakiiladda, ayaa u ansixiyay dhibaatada Coronavirus $8.3bn, si loola dagaalamo, isla markaana waxa la joojiyay gaadiidka Badda, Cirka dhulka iyo Tareenada inta badan gobolada lagu arkay, iyadoo dugsiyada waxbarashadda qaarkood iyo Jaamacaddaha la fasaxay.
Cudurka coronavirus ee ka dhashay Wuhan, Hubei, China, wuxuu ku hanjabayaa inuu carqaladeyn doono kanaalka ganacsiga ee dunida, kuwaas oo durba uu saamayn weyn ku yeeshay ganacsiga isu socodka iyo isku xidhnaanta dhaqaalaha Aduunka.
Maraakiibta ayaa 90% ka ah ganacsiga adduunka isaga goosha ee sida joogtada ah looga helo cunno, shidaal iyo dawooyin macaamiisha adduunka oo dhan. Cudurka coronavirus ee ka dhashay Wuhan, Hubei, China, balse xilligan durba saamayn ayuu ku yeeshay ganacsiga iyo dhaqaalaha dunida, wuxuuna sababay inay gebi-ahaanba kacaan shirkaddo waaweyn oo dunida ah.
Coronavirus, dunida oo dhan waxa la sheegaya inuu gaadhay in ka badan 80 dal, isla markaana uu asiibay 90,000 qof in ka badan , iyadoo tirada dhimashada la xaqiijiyay gaadhay ugu yaraan 3,000.
Malaayiin caruur ah ayuu galaaftay waxbarashadoda, iyadoo dalal baddan hakiyeen waxbarashada Dugsiyada, Jamacaddaha iyo dhammaan kulamada laysugu yimaado, si loo yareeyo faafintaanka Coronavirus, oo hore loo saadaaliyay inuu qiyaas ahaan 60% ay suurta gal tahay inuu gaadhi mujtamaca Aduunka.
Balse xilligan waxa safka hore kaga jira liiska Coronavirus South Korea 6,088, Italy 3,089, Iran 2,922, sidoo kale 706, Japan 331, Germany 262, Spain 222, Singapore 110, France 285, Hong Kong: 105, U.S.159 , Switzerland 90, UK 85.